Barcelona Oo Cashar U Dhigtay Napoli Iskana Xaadirisay Wareega 8da Champions League & Bayern Munich Oo Ay Isbalansadeen - Gool24.Net
August 9, 2020 Saed Mohamed
Kooxda Barcelona ayaa cashar ugu dhigtay gurigeeda Camp Nou kooxda Napoli iyagoo ku garaacay 3-1 ah lugtii labaad ee wareega 16ka Champions League taasoo ka dhigan inay wadar ahaan labada lug kooxda Barca ay ku garaacday Napoli 4-2.
Cabsi badan ayaa laga qabay kulankaan ka dib markii ay lugtii hore ee ka dhacday San Paolo ay ku soo dhamaatay barbaro 1-1 ah, laakiin tababare Setien ayaa shaqadiisa badbaadsaday iyadoo Blaugrana ay iska xaadirisay wareega 8da dhamaadka oo ay isku balansan yihiin Bayern Munich oo iyagana ka soo gudubtay Chelsea.
Bilowgii ciyaarta Napoli ayaa ka naxsatay Barcelona iyagoo birta u garaacay, laakiin kooxda Azulgrana ayaa hogaanka u qabatay ciyaarta daqiiqadii 10aad markii koorno uu soo qaaday Ivan Rakitic uu madaxa ku dhaliyay daafaca dhexe Lenglet.
Barcelona ayaa hogaanka sii dheereysatay daqiiqadii 23aad iyadoo mucjisada reer Argentina uu dhaliyay gool lama filaan aheyd oo u farsamadiisa ku muujiyay, waxa uu ka dhex baxay afar daafac isagoo ku guuleystay inuu kubada dabamariyo goolhaye Ospina.
Daqiiqadii 30aad Messi ayaa shabaqa soo taabtay mar kale laakiin goolka waa la diiday madaama ay kubada ku dhacday gacantiisa iyadoo VAR ay dhowr jeer dib u daawatay dhacdada ka hor inta aysan goolka diidin.
Dhamaadkii qeybta hore ee ciyaarta gaar ahaan daqiiqadii 43aad ayay Barcelona ku guuleysatay rigoore markii uu Koulibaly uu haraantiyay lugta Messi oo gashay booskii kubada, VAR ayaa dhowr daqiiqadood u qaadatay inay ku go’aansato inay rigoore tahay, ugu danbeyna waxay go’aansadeen rigoore.
Luis Suarez ayaa rigoorada u soo istaagay islamarkaana gool u sarifay isagoo ciyaarta ka dhigay 3-0 oo ay Barcelona ku hogaamineysay.
Daqiiqadii 4aad ee shan daqiiqo oo lagu daray qeybtii hore ayay Napoli ku guuleysatay rigoore markii uu Ivan Rakitic uu qalad ku galay Mertens, VAR ayaa xukmisay inay rigoore tahay.
Waxaa rigoorada u soo istaagay Insigne isagoo ku guuleystay inuu gool u sarifo, waxaa qeybtii hore lagu kala nastay 3-1 oo ay Barcelona hogaanka ku heysay.
Qeybtii labaad ee ciyaarta wax badan iska bedelin ciyaarta iyadoo Napoli ay shabaqa soo taabatay daqiiqadii 80aad laakiin goolkooda waxaa loo diiday inuu offside ahaa.
Waxay ciyaarta ku soo dhamaatay 3-1 oo ay Barcelona ku badisay iyagoo guul wadareed 4-2 ka gaaray Napoli una gudbay wareega